नेपालमा गर्भ र गर्भपतनको अवस्था | My Sanchar
काठमाडौं– नेपालमा वार्षिक कति महिला गर्भवती होलान्? तीमध्ये कति नचाहाँदा नचाहँदै गर्भ बसेको होला? त्यसमध्ये कतिले गर्भपतन गर्छन् होला? गर्भपतन गर्नेमध्ये पनि सुरक्षित संस्थामा गर्ने कति र अवैध रुपमा गर्भपतन गराउने कति होलान्?नेपालमै पहिलो पटक गरिएको अनिच्छित गर्भ र गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले यी सवै जिज्ञासाको जवाफ दिएको छ। वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्स्टिच्युटले सन् २०१४ मा गरेको संयुक्त अध्यन गरेको थियो। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा एक वर्षमा १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती भएको देखाएको छ। गर्भवती भएकामध्ये आधाको गर्भ नचाहाँदा नचाहँदै बसेको अध्ययनमा उल्लेख छ।अनिच्छित गर्भको संख्या सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चलमा देखिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अनिच्छित गर्भधारण मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका ५९ प्रतिशतमा, पूर्वाञ्चलमा ५०, पश्चिमाञ्चलमा ४७, मध्यपश्चिममा ४१ र सुदूरपश्चिममा ३४ प्रतिशत रहेको छ।
५८ प्रतिशत गर्भपतन अवैध
अध्ययन अनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन अवैध रुपमा हुने गरेको छ। नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर, अझै सेवाको सहज पहुँच नहुँदा, लाज र डर, सेवाबारे जानकारी नहुँदा, गरिबी, अन्धविश्वास लगायतका कारण वैध भन्दा अवैध गर्भपतन नै धेरै हुँदै आइरहेको छ। अध्ययनले ४२ प्रतिशतले मात्र कानुनी मान्यता पाएका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने गरेको देखाएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एक वर्षको अवधिमा तीन लाख २३ हजारले गर्भपतन गर्छन्। तीमध्ये एक लाख ३७ हजार मात्र वैध गर्भपतन हुन् भने एक लाख ८६ हजार अवैध।
अनिच्छित गर्भमध्ये ६२ प्रतिशतले गर्छन् गर्भपतन
नेपालमा कुल गर्भमध्ये ३१ प्रतिशतले गर्भपतन गराउँछन्। अनिच्छित गर्भमध्ये ६२ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। गर्भपतन गराउनेमा पनि सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चलमा छ।
मध्यमाञ्चलमा प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष) का कुल एक हजार महिलामा ५९ दशमलव १ जना, पूर्वाञ्चलमा ३९ दशमलव ३, पश्चिमाञ्चलमा ३२ दशमलव ४, मध्यपश्चिममा २७ दशमलव १ र सुदूरपश्चिममा २० दशमलव शून्य ६ जनाले गर्भपतन गराउँछन्।
गैरकानुनी गर्भपतन गराउनेमध्ये ६८ प्रतिशतमा जटिल समस्या आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। गर्भपतनपछि जटिल समस्या लिएर आएका ८० हजारमध्ये ६८ प्रतिशत महिलाले गैरकानुनी रुपमा लुकिछिपी गर्भपतन गराएका थिए। असुरक्षित गर्भपतनपछि आएको जटिल समस्याको उपचार गर्न ४४ प्रतिशत निजी संस्थामा, ४१ प्रतिशत सरकारी र १५ प्रतिशत गैरसरकारी संस्थामा गएको अध्ययनले देखाएको छ।
सुरक्षित गर्भपतनले मातृ मृत्युदर घटायो
नेपालमा गर्भपतनले सन् २००२ मा कानुननी मान्यता पाए पनि असुरक्षित तथा गैरकानुनी गर्भपतनलाई रोक्न सकिएको छैन। तर, कानुनी मान्यता पाएपछि नेपालको मातृ मृत्युदरमा भने उल्लेख्य कमी आएको छ। सन् १९९५ मा नेपालमा प्रति एकलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर पाँच सय ८० थियो। तर अहिले यो संख्या घटेर एक सय ९० मा झरेको छ।
सेवा विस्तारमा जोड दिन्छौँः निर्देशक डा. केसी
अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरा मनन्योग्य भएको बताउँदै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार गर्दै लैजाने बताए। उनले सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क दिन सरु गरेका कारण आगामी दिनमा असुरक्षित गर्भपतनको संख्यामा कमी आउने दाबी गरे।
‘यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा र उपलब्ध हुने केन्द्रका बारेमा धेरै प्रचार गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रचारप्रसारसँगै सेवा विस्तारमा पनि हामी जोड दिँदै जानेछौँ।’ उनले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तारभन्दा पहिला परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको विस्तारमा जोड दिने बताए।
कृपाका सहनिर्देशक तथा अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. महेश पुरीले देशभरलाई प्रतिनिधि हुने गरी २७ वटा जिल्लामा यो अध्ययन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अध्ययनमा २७ जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, मेडिकल कलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बर्थिङ सेन्टरमा पुगेर यो अध्ययन गरिएको थियो। यसका लागि ती स्वास्थ्य संस्थाका तीन सय ८६ जना स्वास्थ्यकर्मीसँग अन्तर्वार्ता समेत लिइएको थियो।
Previous : शिक्षक महासंघको जिल्ला अधिवेशन चैतभित्र हुने
Next : जापानमा अनौठो लिंग पर्व
महोत्तरीमा थप ६२ स्वास्थ्यचौकी स्थापना हुँदै
२५ पुष २०७५, बुधबार ०४:०४
निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा ९ सय ६० जनालाई स्वास्थ्य परिक्षण
१४ पुष २०७५, शनिबार २२:०५